Xildhibaanada kasoo jeeda Puntland oo sii faarujinaya Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xildhibaano hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, kana soo jeeda deegaanada Puntland ayaa maanta gaaray magaalada Garowe ee xarrunta maamulkaas.
Waa markii 3-aad ee xildhibaano kasoo jeeda Puntland ay tagaan Garowe iyagoo ajiibaya baaq uga yimid madaxweynaha maamulkaas, C/weli Gaas, kaasoo dhawaan ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Xildhibaanada maanta gaaray Garowe ayaa waxa ay tiro ahaan gaarayeen 6-xildhibaan, Markii ay ka soo dageen Garoonka Diyaaradaha ee Garoowe ayaa waxaa wafdigaasi loo gudbiyay aqalka Madaxtooyada ee Gaas degan yahay, isagoo halkaas ku qaabilay.
Madaxwaynaha Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo la hadlay warbaahinta ayaa Xildhibaanada uga mahadceliyey sida ay u soo ajiibeen baaqii uu ugu yeerayay xildhibaanada Puntland ugu jira Dowladda Fadaralka Soomaaliya .‘’Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkaan ku soo dhaweeyo xildhibanadayadii Dowladda Fadaralka noogu jiray qaybta Saddexaad ee noo timo, waxana ay ka soo jawaaben codsigayagii ‘’ ayuu yiri Madaxwayne Gaas.
‘’Waxaanu ugu yeernay xildhibaanada wada tashi inaanu ka samayno xaalada Taagan iyo guud ahaan xaalada soomaliya ‘’Ayuu hadalka raaciyay Madaxwayne Dr.Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Xildhibaan Cali Ameeriko oo qayb kahaa wafdiga xildhibaanada ah ee maanta Garoowe soo gaarey, ayaa isna sheegay inay aad ugu faraxan yihiin kusoo laabashadooda Puntland islamarkaana ay aqbali doonaan go’aan kasta oo dadka iyo dowladda Puntland ay gaaraan.
Bishan Agoosto horraanteedii qaybtii ugu horreysay oo xildhibaano deegaanada Puntland kazoo jeeda oo ka tirsan baaralamaanka Soomaaliya ayaa soo gaarey magaalada Garoowe. Tiradoodu lix xildhibaan ayey ahayd, waxaana horkacayey Xildhibaan Xasan Abshir Faarax.
10-kii bishaan Aoosto ayaa qaybtii labaad oo xildhibaano ah oo iyaguna afar ahaa ay soo gaareen magaalada Gaalkacayo ee xarunta gobolka Mudug. Xildhibaan Maxamed Xuseen Xagaafe ayaa hormuud u ahaa xildhibaannadaas.
Tirada xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda Puntland, islamarkaana ajiibay baaqa Gaas ayaa gaaraya 16 xildhibaan, kuwaasoo haatan ku sugan Garowe.
Maamulk Puntland ayaa carooday kadib markii [30/7/2014 magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiis lagu dhisayo maamulka goboleedka Gobollada Dhexe oo ka kooban Gal-guduud iyo Mudug.